Accueil > Gazetin'ny nosy > Politika : Aleo hovaina ny renivohitra fa tsy tia fandrosoana
Filamatra tamin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara izany Antananarivo renivohitra izany na Analamanga. Tsy hitanisa ny zavatra kanto sy tsara nisy teto Imerina isika satria dia maro ny ohatra navelan’ireo mpandinika sy ny olon-kendry tamin’izany noho ny hatsarana nisy teto amin’ity tanàna renivohitra ity. Hoy ny mpihira sy ny mpanakanto raha nilaza ny hatsaran’Antananarivo : “raha hiakatra any Imerina any dia ataovy be ny vola hoentina midola…”.
Antananarivo dia renivohitra ihany koa amin’ny resaka fifanakalozana ara-barotra sy indostria ka manana ny maha izy azy tamin’ny ekônomia teto Madagasikara. Eto Antananarivo no ahitana ny 99% ny orinasa eto Madagasikara.
Tsy izany ihany fa mbola Antananarivo koa nilazana fa isan’ny manana olona manampahaizana indrindra. Profesora, dokotera, manamboninahitra ambony, sy mpandraharaha lehibe teto Madagasikara. Misy ny mpanao politika be indrindra eto Madagasikara ihany koa ity renivohitry Madagasikara ity. Eto Antananarivo koa no misy ny foibe ny fampianarana sy ny fampianarana rehetra eto Madagasikara.
Maniry ny hakanto ny zavatra misy eto ivon’ Imerina ny olona rehetra avy any amin’ny faritany manerana an’i Nosy. Tena zava-dehibe amin’ny olona any amin’ny farintany izany hiakatra eto Imerina izany na dia hijery ny fandrosoana fotsiny aza. Matetika ny mpanao politika sy ireo izay tsy mandinika firy ny firafitry ny fitondrana an’i Madagasikara dia milaza fa hiangarana Antananarivo. Misy maha marina azy izany ary tsy diso koa saingy mila resahina sy dinihina tsara satria lasa resaka sy adihevitra diso no hiafarany, satria Antananarivo ankoatran’ny maha tanàn-dehibe azy dia renivohitry ny firenena koa. Toa ny firenena maneran-tany dia manana ny satany manokana izany renivohitra izany ka tokony hanana ny toerany manokana eo anivon’ny firenena. Indraindray aza dia toa lasa taritin’ny tsy misaina ho entina hambolena adim-poko izany toerana manokana misy an’Antananarivo izany.
Tsy izany intsony nefa no zava-misy ankehitriny raha eo amin’ny lafiny hatsarana sy hakanton’Antananarivo. Niova dia niova be ka tsy mendrika ny atao hoe renivohitry ny firenena Malagasy intsony.
Loto izay tsy izy intsony no misy sy iainana eto Antananarivo ankehitriny. Mangery na mivoaka eny rehetra eny ny mponina eto. Tsy mifidy toerana hamaniana sy hanaovana maloto. Raha miteny izany amin’ny olona izay zatra manao izany ankehitriny dia ianao izay milaza na manoro hevitra amin’izany indray no antsoina hoe “miseho azy mianan-kendry na be hevitra, na koa misengisengy”. Tsy izany ihany fa mety hahazo daroka sy ompa koa aza amin’ireo olona izay tenenina amin’izany. Raha ny fanjakana indray no mandray fanapahan-kevitra amin’ny fanatsarana ity renivohitra ity dia tonga avy hatrany ny filaharana eny an-dàlambe. Nefa ange dia hita izao fa fanatsarana ara-drariny sy hitsiny ary ara-dalàna no atao.
Tsy izay ihany fa ny mpanao politika nitondra ny kaominina eto Antananarivo renivohitra tamin’ny andron’i ramatao Lalao Ravalomanana izay vadin’ingahy Ravalomanana Marc izay filoha mpanongam-panjakana teo aloha dia nanao izay hahapotika ity Antananarivo ity nanomboka ny taona 2014 ka hatramin’ny taona 2018. Nasiany trano fivarotana avokoa izay sisin-dàlana rehetra ka malaladalaka teto Antananarivo. Hatreny ampovoan’ny arabe no nanorenana kabone fangerena sy fipipizana, ary dia niarahana tamin’ny mpanolotsainan’ny kaominina Antananarivo renivotra TIM (Tiako i Madagasikara) izany.
Amintsika miteny izao dia mahatratra 3000 mahery ny trano naorina tsy amin’ny ara-dalàna eto Antananarivo renivohitra noho ny nataon’ireo TIM sy Ravalomanana Lalao ary Marc Ravalomanana izay milaza tamin’izany fa mpanolotsaina manokan’ny vadiny nandritry iny mandà iny.
Tsy nijanona teo ny raharaha fa nasainy nivarotra teny ampovoan-dàlana koa ireo mpivarotra madinika eto Antananarivo. Tsy hay teneninan intsony ny loto sy ny fako mivangongo etsy sy eroa ka fofona maimbo izay tsy izy no heno manerana ny renivohitry Madagasikara ity.
Mahita ny zava-misy eto Antananarivo ankehitriny izahay avy any amin’ny faritra ankehitriny dia alaim-panahy hilaza hoe “aleo afindra any amin’ny faritra indray ny renivohitry Madagasikara ity fa tsy hain’Antananarivo intsony ny mikajy azy”. Izay fandaminana ataon’ny fanjakana hanatsarana ity toerana ity dia tsy maintsy misy fanoherana ataon’ny mponina eto Antananarivo azy. Amin’izao fotoana izao dia tsy vitan’ny filaharana ihany fa nanao izay hisian’ny korontana koa ny mpanohitra eto Antananarivo tarihin’ingahy Ravalomanana Marc sy Hery Rajaonarimampianina amin’ny alalan’ny HVM izay tarihin’ingahy Rivo Rakotovao. Izy roalahy ireo nefa no ambaniandro nanapotika be indrindra ity firenena ity ka isan’izany Antananarivo.
Taratry ny fandrosoana eto Madagasikara Antananarivo ka rehefa tsy hanara-dalàna sy hitsipaka izay fampandrosoana hataon’ny fanjakana eto ny mponina eto dia andao mba hatao any amin’ny faritany indray ny renivohitra fa raha tonga any io tsy ho potehinay toa izao anaovan’ny vahoaka azy izao.
Isan’ny renivohitra maloto indrindra maneran-tany Antananarivo amin’izao fotoana izao.